Mberede: PSA CRJ na Charlotte
Mberede: PSA CRJ na Charlotte 3 afọ 4 ọnwa gara aga #205
Otu PSA Airlines Cairmair CRJ-700 maka ụgbọelu ụgbọelu AA-709 site na Charlotte, NC na Gulfport, MS (USA) na ndị 5320 na ndị ọrụ 44, si n'ụgbọ okporo ígwè 4C nke Charlotte na 36: 11L (42: 16Z ) ma nọrọ na nrịgo mbụ mgbe ndị ọrụ ahụ kwuru na ha anụwo ụda dara ụda. Ụgbọelu ahụ kwụsịrị ịrị elu na 42 ụkwụ. Nnyocha a na-agba ọsọ ụgbọ mmiri hụrụ otu nwatakịrị nwụrụ anwụ n'okporo ụzọ ahụ, ụgbọelu a na-etinye maka ebe dị ala na-agba ọsọ 4000R ka a nyochaa ya na ala. Ụlọ elu kọrọ na ọ na-ahụ nkedo atọ ọ bụla, ọ pụtara na e nwere égbè na-abịa n'akụkụ aka nri. Onye ọzọ na-anya ụgbọelu kwuru na ígwè ọrụ aka ya pụtara na ọ ga-eri. Ndị ọrụ mberede na-agụpụtara maka enyemaka. Ugbo elu ahụ rịgoro na 36 ụkwụ, ndị ọrụ ahụ gwara ha na ha na-eme atụmatụ ịhapụ ọsọ ọsọ ahụ ma ọ ga-akwụsị ma wepụ ya ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla a chọpụtara banyere ịkụ mmanụ. Ụgbọelu ahụ nọ maka nkwụsị zuru ezu na-agba ọsọ na 4000R ọsọ ọsọ banyere minit 36 mgbe obere ala na 10 nkeji mgbe ọpụpụ, gbapụrụ ọgba ọsọ ahụ site na nnukwu ọsọ gbanyụọ R, kwụsịrị mgbe akara eriri jide ma wepụ ya. Ọrụ mberede na-emechi ụgbọ okporo ígwè ma na-agbọpụ ụgbọelu na-ekwupụta ọtụtụ mmanụ na runway. Ndị bi n'ebe ahụ na-ebugharị ụgbọelu ahụ ngwa ngwa site na steepụ arịgoro ma na-agafe na njedebe, enweghị mmerụ ahụ. Ụgbọelu ahụ kwụsịrị imebi akụkụ nke aka nri.
Mberede: PSA CRJ na Charlotte 3 afọ 4 ọnwa gara aga #206
Ọfọn, o yiri ka ọ bụ oge iji nyochaa nsu gburugburu ọdụ ụgbọ elu ebe ọ bụ na ọ naghị echekwa di ka ọ kwesiri. Onwe m, naanị m na-ekwu na-ewuli ya elu. Enweghi obi mmadu obi ojoo, obu ezie na enwere m olile anya na odi ngwa ngwa maka odi.
Mberede: PSA CRJ na Charlotte 3 afọ 4 ọnwa gara aga #208
Ụgbọelu ahụ adịlarịrị n'elu, ya mere ka anyị sị 150 + kts..Echere m na ọ dị ngwa ngwa. Na-enwe mwute maka anụ ọhịa ahụ mara mma na iwe, iwe na ihe ndị ọzọ n'ihi nchebe ọdụ ụgbọelu. E nwere ọtụtụ ihe na-enye obi ụtọ mgbe ahụ. Chee echiche otu ihe a na ... ka anyị sị -737.
Ọzọkwa, mgbe ị na-atụle na e nwere ọtụtụ ọdụ ụgbọelu na mpaghara ugwu, ebe oke ndepụta nke ụmụ anụmanụ nwere ike iru na-agba ọsọ, dị ka Grizzly, ma ọ bụ na-aga n'ebe ndịda, ihe dị ka onye mgbachi. Oge na-eteta.
Mberede: PSA CRJ na Charlotte 3 afọ 4 ọnwa gara aga #219
Oge ike page: 0.447 sekọnd